Umsebenzisi uzithumela i-AirTag ngeposi ukuze abone ukuba angalandelela na uhambo | Ndisuka mac
Ukusukela oko kwabekwa ngokusesikweni ii-beacon zeendawo zika-Apple, ii-AirTags, inkampani ibanga ukuba ayenzelwanga ukulandela abantwana kunye nabantu okanye izilwanyana, nangona oku kukusetyenziswa kwabasebenzisi abaninzi ekuqaleni. Abasebenzisi abaninzi bayazibuza, ingaba umthamo wokulandela umkhondo wezi zixhobo zincinci uchanekile kangakanani?
Omnye wabasebenzisi bokuqala ukufumana ii-AirTags zokuqala, wayefuna ukufumanisa ngokungathandabuzeki kwaye i-AirTag yathunyelwa ngeposi. Sebenzisa uMatshini oZenzekelayo, ungene kwindawo ye-Apple's locator beacon rhoqo emva kwemizuzu emibini Ngaba indawo yomkhondo weAirTag njengoApple ithi iyayenza? Kule vidiyo ilandelayo ungayibona impendulo, kodwa sele ndikuxelele ukuba ewe.
Ngexesha lenkqubo, ibhakana ayikwazanga ukubonelela ngolwazi lwendawo kwizihlandlo ezimbalwa, into ekunokwenzeka ukuba ibangelwe yingxaki ethile yokuqala nomsebenzi woPhando omtsha, owawungahlanganiswa ngelo xesha ...
Umfo waseNetherlands odale le vidiyo uthi olu luvavanyo lokuqala lokujonga ukusebenza kwe-AirTag. Uvavanyo olulandelayo luya kuba yithumele kwelinye ilizwe ukulandelela indawo ekuyo ngalo lonke ixesha.
Isebenza njani i-AirTags
Indawo ye-Apple beacons zisebenzisa ii-iPhones njengohlobo lwenethiwekhi enemingxunya, ngenxa yoko ithiyori, zichanekile ngakumbi kuneemveliso zembangi yayo ephezulu kwintengiso, Ithayile.
Iibhakoni zeendawo zeSamsung ezathi zaziswa ngoJanuwari, zisebenza ngendlela efanayo neka-Apple, kodwa usebenzisa inethiwekhi yeselfowuni yeSamsung.
Ii-AirTag eziwela ngawo, zithumela indawo kumnini webhakana ngaphandle komnini we-iPhone usebenzise ukuthumela ulwazi olwaziyo, ulwazi olubhalwe ngokufihlakeleyo ukusuka kwibhakoni ukuya kwiiseva zika-Apple ezibuyisela indawo kumnini wayo wokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umsebenzisi uthumela i-AirTag ngeposi ukuze abone ukuba bangalandelela na uhambo
I-TSMT ikulungele ukuba nezikrini ze-miniLED zeMacBook Pro entsha ekulungele ukuphela kwe-2021